कपिलवस्तुमा फेरी एक क्रु'र ह'त्या ! आखिर कसले र किन गर्यो त ??
कपिलवस्तु, २८ मंसिर। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ चन्द्रौटामा एक महिलाको गए राति ह’त्या भएको छ। चन्द्रौटाको पुरानो बजारमा डेरा गरी बस्दै आएकी दाङ सतवरिया घर भएकी ५१ वर्षीया महिला सुशीला खड्काको ह’त्या भएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक दिपेश खरेलले जानकारी दिए ।
टाउको तथा मुखमा धा’रिलो ह’ति’यार प्रयोग गरी क्रु’र तरिकाले ह’त्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । ह’त्याको आङ्शकामा प्रहरीले डेरामा सुशीलासँगै बस्ने भतिज तारणबहादुर खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर अनु’सन्धान गरिरहेको बताएको छ। महिलाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पलात तौलिहवा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक खरेलले बताए ।
महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा गएराति ७ जनाको मृत्यु